Daabacaadda - Shanghai Comi Aroma Co., Ltd.
Dhalada Qurxinta Qurxinta
Is-rogo Dhalo Cadar ah
Dhalada Xanaaqa Buufin ee Daryeelka Shakhsiyeed
Tuulada dhalada ah
Wasakhda gaarka loo leeyahay
3D Sample Sample
Comi Katalogga Comi
Wakiil La Raadinayo
Ugu dambeyntiina, qaybta ugu dambeysa ee halxiraalaha ee ah muuqaalkaaga gaarka ah ayaa ah sida magacaaga iyo macluumaadkaaga wax soo saar loogu daabaco baakadkaaga. Halkan, waxaan ku siineynaa fursado kala duwan oo buuxa, oo ay ku jiraan baaritaanka xariirta, daabacaadda dejinta, HTL / Sumadda Kala Wareejinta Heat, shaabad kulul, laser xoqidda. Waxaan sidoo kale bixinnaa adeegyo si loo habeeyo sanduuqyada daabacan ee loogu talagalay baahiyahaaga baakadaha.
Haddii aad dareento inay kaa adkaadeen xulashooyinka, khubaradayada ayaa kaa caawin kara inay ku hagaan. Nala soo xiriir
Baadhitaanka xariirku waa habka loo maro khadadka iyada oo loo marayo shaashad sawirro lagu daaweeyay dusha sare ah. Hal midab ayaa markiiba la mariyaa, oo leh hal shaashad hal midab. Tirada midabada loo baahan yahay ayaa go'aamisa inta baas loo baahan yahay daabacaadda shaashadda xariirta. Waxaad dareemi kartaa dusha sare ee sawirada daabacan dusha sare ee qurxinta.
Daabacaadda 'Offset' waxay isticmaashaa taarikada daabacaadda si ay khad ugu gudbiso haamaha. Farsamadan ayaa ka saxsan daabacaadda silkscreen waxayna wax ku ool u tahay midabbo badan (illaa 8 midab) iyo farshaxan halfone. Nidaamkan waxaa loo heli karaa tuubooyinka oo keliya. Ma dareemi doontid muuqaalka sawir gacmeedyada daabacan laakiin waxaa jira hal xarriiq midab-baddal ah oo tubbada ah.
Kudar: No.1500 Tingwei Road, Degmada Jinshan, Shanghai, Shiinaha.
Micnaha calaamadda oi muhiim ah ...
Sida loo doorto awooda iyo baakadaha ...
Alaabada Featured - Khariidadda bogga - Goob Mobilka